Phuket izivakashi zethu lihlotshaniswa ngokuyinhloko edolobheni Patong, kodwa namanje amabhishi eziyihlazo elimhlophe Karon futhi Kata. Kodwa lapho esiqhingini nezinye izindawo zokungcebeleka. Ngakho, ngo-tip enyakatho-nempumalanga ye-Phuket kuyinto Nai lolwandle Young Beach. Luhle abathandi ukuphumula endaweni ethule, ucabangisisa. Akufanele sicabange ukuthi abakhileyo amahhotela zendawo benqunyiwe nezwe elingaphandle. Khona-ke kukhona nengqalasizinda edingekayo ngesimo amathilomu, izindawo zokudla kanye nezitolo. Into kuphela ukuthi akuyona lapha, kungcono nightlife umsindo ovala izindlebe wokudubula njengoba Patong. Kodwa izivakashi ezimbalwa ungakwazi ngiziqhayise ukuthi baphumula ngekhanda ensimini ka kazwelonke park emvelo. On the front ikhasi ujenga esimhlophe lolwandle amahhotela. Omunye wabo Nai Yang Beach Resort 4 *. On kuzoxoxwa ngawo kulesi sihloko. Incazelo yaleli hhotela sakha kuphela Izibuyekezo ukuthi kakade wakwazi ukuya khona.
Lapho itholakala futhi kanjani lapho?
Ihhotela Nai Yang Beach ke abantu abajwayele ukuvakasha kuyona 4 * itholakala ethekwini Nai Yang, e ichopho enyakatho ntshonalanga ye isiqhingi Phuket (Thailand). Spa Ihhotela umi phezu umugqa wokuqala ebanzi sandy beach ngilulekela ngezinyawo amakhilomitha amathathu. Iya ulwandle esiphezulu amamitha angamakhulu amabili. Kusukela international airport Phuket ehhotela ukuya imizuzu engaba yishumi. Abavakashi, okuyinto wawuyingxenye ukudluliswa ukuvakasha iphakethe, bathi lokuqala alethwe indawo yokuphumula. Naphezu budebuduze sezindiza, umsindo lezwakala livela izindiza. Le ndawo lidumile bendawo abathanda ukuza lapha ngempelasonto futhi ube namanye esake sawenza sisendleleni. Ngakho-ke, i-Nai Yang Beach kuyindlela enhle kakhulu ukuba abale 402. Kuleli endaweni - phikisana Izibuyekezo - baphawula ibhalansi ezimangalisayo phakathi ezolile futhi aziphumulele ucabangisisa futhi ziyinto engenakulibaleka. Ungakwazi umane uhlangane nemvelo. Yonke indawo imihlume, casuarinas nezinye izitshalo ezingavamile. Nokho, uma ufuna impucuko, ungahlala ezindaweni zokungcebeleka eseduze amatasatasa.
Nai Yang Beach Resort 4 * (Phuket) - ihhotela elincane. Nokho, okuhlangenwe nakho abasondelana awusebenzi ukukhiqiza. Zonke ngenxa yokuthi azikho neqembu elikhulu nomsindo zibuthuntu ehhotela imihubhe nezicabha nhlangothi zombili. Azikho izivakashi ehhotela bahlala enhle esalisekela futhi ezimbili storey Bungalows, okuyinto kusekeliwe kufihlwe zasemazweni izingadi aluhlaza ezishisayo. Buildings yakhelwe ngendlela yokuthi abantu abebehlala ngangokusemandleni ukubona nokuzwa omakhelwane wakho, kodwa kuphela bayahlonishwa umbono lolwandle (noma pool) futhi ngajabulela umsindo emadlambini. Ihhotela has umoya cordiality baboniswe nomoya wokungenisa izihambi, kubonakala sengathi ukuza eholidini ukuze umndeni wami - lena emkhathini umndeni. Russian amancane, ikakhulukazi ezokungcebeleka nabahambi Western futhi eYurophu Ephakathi futhi China. Ngo ethekwini Nai Yang ngokuvamile amahhotela ezintathu kuphela. Eduze "Ruan Meyi Beach Resort Indawo abantu" nokuthi "Kokun Spa Indigo Pearl."
Zonke izivakashi badumise namakamelo abanzi, ukhululekile futhi ihlanzekile ngaso Nai Yang Beach Resort 4 *. Photo esinamakamelo, amakamelo ophilayo, izindlu zangasese kanye umbono ngisuka esitezi engangikuso, ahambisane cishe njalo ukubuyekeza mayelana ehhotela. Amagumbi elise amaphiko ezintathu: entsha, ezishisayo empumalanga (zaseMpumalanga). Futhi izindawo (namanani) guest amakamelo zihlukaniswe ngezigaba ejwayelekile ayiwele naye, Deluxe (nge ukufinyelela ngqo utshani), Thai suite mini, Thane Grand. Iyatholakala futhi lonke villa ne yangasese yokubhukuda zomkhaya omkhulu noma inkampani. Siqaphele ukuthi izivakashi Kuyaphawuleka ukuthi igumbi ngalinye has isitayela laso. Njengoba ungase ulindele ehhotela, isivakashi amakamelo anemisila Izinsiza eziningi. ukushisa Tropical dingisa away air conditioning enamandla (kuwo wonke amagumbi zingabantu ngisho ezimbili). a-TV enkulukazi ngeziteshi satellite. Yini ebaluleke kakhulu, amakamelo isiqandisi lapho ungakwazi ukugcina imikhiqizo yakho. Izindlu ezincane anemisila zangasese kanye zokugeza agcwaliswa nsuku zonke. Igumbi ngalinye has konke okudingayo ukuze bakwazi ukuzenelisa iziphuzo ezishisayo.
Izindleko yokuhlala Ihhotela Nai Yang Beach Resort 4 * (Phuket) kuhlanganisa ibhulakufesi. Ziphakelwa le "Sand" yokudlela, elithatha ithala ongaphandle ngaphezu egumbini. Ukudla kwasekuseni okuhambisana ngokugcwele igama layo - "yezwekazi" ngoba kunomsoco kakhulu. Labapheki abazama ukujabulisa wonke umuntu futhi ulungiselele izitsha izinto ezingafani. Lapha ungakwazi ukujabulela kokubili cuisine classic European (amasosishi ngiyocasha amaqanda, omelettes, amasaladi, Muesli, iphalishi, pancake, croissants, ujusi, ikhofi, ehla) bese uyazama izitsha Thai.
Njengoba for ntambama nakusihlwa nako ukudla, ethekwini Nai Yang ezisibangela ezihlukahlukene yokudla izindawo. Kakhulu isabelomali samuntu kukhona makashnits. Bafika nabangane babo 'ensimini ekhishini "ngesikhathi sekhefu nalapho Fry prawn okumnandi, kebabs nezinye izinto ezidliwayo. Labo abangavumelani esifushane imali, wena angaphakamisa yokudlela "Rodcharin". Yiqiniso, kukhona esitolo eseduze "Eziyisikhombisa / Eleven" futhi kathathu ngesonto ihlelwe ngu emakethe. Kuyinto ngokwako asempumalanga Oriental kuyinto izivakashi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuthenga izithelo ezishibhile, imikhiqizo lolwandle, eziyisikhumbuzo.
Ibhishi & Pools
Ihhotela Nai Yang Beach Resort 4 * ehlukanisiwe ulwandle kuphela ukuvakasha. Nai Yang, njengazo zonke amabhishi eThailand nedolobha, kanye entry mahhala zonke. Yena uphahlwe eziningi sun bed nezambulela, kodwa lokhu iyisevisi ikhokhwe - a Baht namashumi amahlanu ngosuku. Nokho, izivakashi eziningi ukwenza ngaphandle lokhu izinhlamvu lolwandle. Iqiniso lokuthi ilungelo phakathi isihlabathi ezimhlophe ogwini ethekwini Nai Yang, khula shanguzo emangalisayo - casuarinas. Amphonsa openwork umthunzi, okungadingi bazizwa ukushisa. Ngakho ethule ungakhululeka nasethawuleni esihlabathini esithambile. Ngena ngemvume ulwandle engajulile, okuyinto kuhle imindeni enezingane. Ziyafika ziphinde abalulekile lapha. Phakathi nayo yonke obala coral yokhalo yabo. itheku Bay eziphephweni zamakhorali. Beach has fun ezinye phezu kwamanzi, kodwa zinikezwe yokuthi ogwini kuyingxenye esiqiwini, ezinezinjini izikebhe lapha ingcosana. Ungakwazi fly ku inyoni yephepha, zokushushuluza, ukuzijayeza ku-kayaking. Izibuyekezo sebebike ukuthi i ezinhle dive indawo itholakala ikhilomitha ukusuka ogwini. Esikhathini ehhotela has okubhukuda ezintathu. Nakanjani ukuthi ilanga loungers nezambulela ahlala phakathi kwabo mahhala ehhotela izivakashi.
Amasevisi Nai Yang Beach Resort 4 *
Mahhala yokupaka - plus enkulu ehhotela, ngoba ukuhamba khulula lingasempumalanga yalesi siqhingi, izivakashi eziningi ukuthatha isithuthuthu aqashiwe. Futhi ungakwazi ukuqasha ibhayisikili ehhotela. Ngesikhathi reception, nesebenzela ubusuku nemini, ungakwazi ukubhuka izinkambo. Ilondolo, ngenhlanhla futhi isebenza ehhotela, futhi uma ufuna ungasebenzisa amasevisi ayo. Ukuze abatshuzi wavula isikhungo diving ehhotela ohlinzekela nezinsiza Imali instructor kanye nokwesekwa ukuze izixhobo zamakhorali zamakhorali. Okusanda, ihhotela saziwa ngokuthi Nai Yang Beach Resort Spa 4 *. Ushintsho elincane uphawu kubonisa ukuthi ihhotela ivule isikhungo spa. Kukhona ungakwazi kudlule inkambo massage (Thai noma uwoyela), ubuhle zokwelapha ebusweni nasemzimbeni.
Budebuduze naleli kazwelonke park emvelo "Sirinat" kubangela kanye nokuzikhethela ikhambo. Izibuyekezo Kunconywa ukuthatha uhambo usuku esiqiwini. Kuhlanganisa ugibele izindlovu, Rafting Phakathi kwesitaladi sawo nomfula Ukuvakashela izinkawu ezingasetshenziswa ukondla. Kodwa singakwazi futhi ngokwabo ukudabula izindlela phakathi imihlume. Labelling ngeke akuvumele ulahleke. Kukhona olwandle kanye nezinye ezikhangayo. Fix karma kungaba ethempelini Wat Nai Yang. Kukhona isikole - diving, ukuntweza ikhayithi, massage Thai, yoga kanye amakilasi ukupheka. Kuze kube muva nje ngomkhumbi phakathi bay amaqanda giant Izimfudu zasolwandle. Futhi bathi, namanje kuyabonakala esikhathini okuhambisanayo. Futhi ogwini eduze Nai Yang Beach Resort 4 * ngemva kwesiphepho, ungathola amapharele. Kukhona futhi izingcezu ezinkulu unina pearl.
Nai Yang Beach Resort 4 *: Izibuyekezo
Izivakashi badumise kwamahhotela izindawo elikhulu oluhlaza, okubhukuda ahlanzekile, enhle, inakekelwa kahle futhi amakamelo ukhululekile. Abasebenzi ehhotela - kakhulu ukwamukela. Yiqiniso, isiRashiya akakhulumi, kubalulekile ukwazi okungenani kancane isiNgisi. Zonke badumise ibhulakufesi. Abanye baye bazama sedina ngesikhathi "Sand" - amatafula akhonzwa ithoshi ogwini isihlabathi. Eqolo, kodwa ezihlwabusayo kakhulu. Izethameli ngesikhathi ikakhulukazi onokuthula ehloniphekayo. Ihhotela Nai Yang Beach Resort 4 * Izibuyekezo batusa for kukalwa lolwandle iholide.
Rhinoplasty - kwesikhathi nokuvuselelwa